China Manifolds ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Cepai
Standard FC ọnụ ụzọ ámá valvụ dị na API 6A 21th mbipụta ọhụrụ, ma jiri ihe ndị kwesịrị ekwesị maka ọrụ H2S dịka ọkọlọtọ NACE MR0175.
Klas ihe: AA ~ FF
Klas okpomọkụ: PU
A nakweere Choke Manifold iji mepụta usoro ịkụ egwu-ọma nke nrụgide nhazi. Choke Manifold nwere ike izere mmetọ nke oyi akwa-ma melite ọsọ nke mkpọpu ala ma na-achịkwa mmechi nke ọma. Otutu uzo ejiri mekpue valves, uzo valvụ, ọkpọkọ akara, akwa akwa, gauges nrụgide na ihe ndị ọzọ. CEPAI Drilltech na-ebunye ọtụtụ ihe dị iche iche site na 2-1 / 16 "~ 4-1 / 16", na nrụgide ọrụ 2,000PSI ~ 20,000PSI dị ka API SPEC 16C / 6A.
Igbu ọtụtụ dị mkpa akụrụngwa dị mma-akara usoro imipu mkpọpu ala mmiri n'ime ọma gbọmgbọm ma ọ bụ igba mmiri n'ime wellhead. Ọ mejupụtara valvụ ego, ọnụ ụzọ ámá valvụ, nrụgide gauges na akara ọkpọkọ. CEPAI na-ebunye ọtụtụ igbu mmadụ site na 2-1 / 16 "~ 4-1 / 16", na nrụgide ọrụ 2,000PSI ~ 20,000PSI dị ka API SPEC 16C / 6A.
Mgbapu Apịtị Manifolds
Drilling muds manifold mejupụtara apịtị valvụ, elu nsogbu * Tụkwasị n'otu, elu nsogbu isi n'otu, ịkụ gọlfụ, elu nsogbu sooks, ikiaka, mgbali nlele, na nwa njikọta wdg CEPAI Drilltech ọnọde dị iche iche apịtị manifold si 2 "~ 4", na-arụ ọrụ mgbali 2,000PSI ~ 10,000PSI dị ka API SPEC 16C / 6A
Manifolds Ule Elu
Nhazi nhazi nke osisi ule di n’elu di. Ndị a na-agụnye swab, nna ukwu dị elu, mmepụta, na igbu eriri valves. A na-ahụkwa atụmatụ ndị nwere valvụ nke dị n'okpuru nke dị n'okpuru swivel. Ule Mgbochi ma ọ bụ Osisi Mgbochi Ọdịmma na-abịa nha site na 3 1/16 "ruo 7 1/16" na 5,000 psi site na 15,000 psi (okpomọkụ si -50 Celsius F ruo 350 Celsius). Nhazi nhazi dikwa na arịrịọ.
Nnukwu Nsogbu Mkpagbu & Gbuo Manifolds
Site na itinye ihe ndi di ka ndi nwere ike imeghari na ndi oma, ndi choro hydraulic, API Flanges, ndi oru hamer, ndi hapuru API, ndi na-agha anya, ihe ndi ozo, ndi na-acho ha, ndi na-eme ka ha di elu, ndi na-eme ka ha di elu, ndi na-eme ka ha di elu. (Akwụkwọ ntuziaka na mmanụ ụgbọ elu hydraulic), Valve Nrụgide Nrụgide, Mgbapụta esororo, Tees ndị e mebiri emebi, agbagọ agbatị ogologo oge, Nzukọ a na-anwale nrụgide, Ntugharị Ntugharị Onwe Onye na Ọnụ Gatezọ Gatemá Gate, Mud Vales, Drop Forged Manifold Fittings, Chokes, High Pressure Choke Valves. , Nnukwu Mmetụta Nyocha Valves, Hammer Union Forged Tees and Elbows a dabere na ngwa ahụ site na nnweta ngwaahịa anyị, CEPAI nwere ike ijikwa ogo na mmemme nke sistemụ siri ike. CEPAI chọsiri ike isoro ndị ahịa na-arụ ọrụ iji nye azịza ziri ezi maka ọrụ ọ bụla. N’ebe odi nkpa ma obu iji zute ihe ndi ahia choro ma nye gi ikike nke ndi ikike nke ato n’onwe ha.
Osote: UFU ISI